PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: ရုရှ မှ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရောင်းချမှု စံချိန်သစ်တင်
ရုရှ မှ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရောင်းချမှု စံချိန်သစ်တင်
??? ရေနံသဘာဝဓါတ်ငွေ့ မြေပေါ်မြေအောက် သယံဇာတ ရောင်းချရငွေတွေကို ရုရှာဘဏ်မှာ ????
ရုရှ ဖက်ဒရေးရှင်း နိုင်ငံအနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ စစ်လက်နက် ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရောင်းချမှုမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ဒေါ်လာ ၁၅.၁၆ ဘီလီယံ ဖြင့် စံချိန်သစ် တင်နိုင်လိုက်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု စစ်အေဂျင်စီအား ကိုးကား၍ မော်စကိုမှ လာသည့် IANS သတင်းတရပ်က ဆိုသည်။
ရုရှလုပ် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများကို အိန္ဒိယက အများဆုံး ဝယ်ယူပြီး မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်၊ ဗင်နီဇွဲလားနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံများမှာလည်း အဓိက ဖောက်သည် နိုင်ငံများ ဖြစ်ကြသည်။
“မဏာမ တွက်ချက်မှုများအရ လက်နက် တင်ပို့ရောင်းချမှု ပမာဏဟာ ဒေါ်လာ ၁၅.၁၆ ဘီလီယံ ရှိတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ စီမံကိန်းကို ၁၁၁.၈ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ဖြည့်စွမ်း နိုင်ခဲ့ပါတယ်” ဟု ပြည်ထောင်စု စစ်နည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဌာန (FSMTC) ဦးစီးချုပ် အလက်ဇန္ဒား ဖိုမင် က ဆိုသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်အတွင်း လက်နက် တင်ပို့မှု မြင့်တက်လာကာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က ဒေါ်လာ ၁၃.၂ ဘီလီယံ
ရောင်းချ နိုင်ခဲ့ကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ရုရှသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမေရိကန်ပြီးလျှင် ဒုတိယ စစ်လက်နက် အရောင်းရဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ FSMTC အဆိုအရ အထူးသဖြင့် ရောင်းပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုအပိုင်းတွင် ညံ့သော်လည်း လက်နက် အရည်အသွေးကို တိုးမြှင့်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Copy from - Mizzima News
Posted by PNSjapan at 11:03 PM